Wadaad lagu eedeeyey inuu yiri ereyo faqooqa dadka Yuhuudda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Masjid ey ku cibaadeeysaneyaan dad muslimiin ah. sawir: Marcus Ericsson/TT
Wadaad lagu eedeeyey inuu yiri ereyo faqooqa dadka Yuhuudda
Faqooq lagula kacay qowmiyadda Yuhuudda
La cusbooneeyay tisdag 15 augusti 2017 kl 12.06
La daabacay tisdag 15 augusti 2017 kl 10.39
Iimaan ku xiran masjidka magaalada Helsingborg ayaa qowmiyadda Yuhuudda ku matalay iney asal raac ku leeyihiin daayeerta iyo khaansiirka.
Gabagabadii bishii luulyo oo magaalada Helsingborg lagu qabtay bannaan-bax ayaa dacwad la xiriirtay meel kaga dhac loo geeystey qowmiyadda Yuhuudda looga gudbiyey ciidanka ammaanka iyo weedho goobtaasi laga jeediyey.
Iimaanka masjidka Helsingborg oo dadka bannaan-baxaya la hadlayay ayaa qowmiyadda Yuhuudda ku tilmaamay iney asal ku leeyihiin daanyeerta iyo xayawaanka khaansiirka.
-Alla maxaad eray, eray u xasuusataan ereyadii aan goobta ka jeediyay. Anigu guud ahaan ma xasuusto wixii aan sheegay, hase yeeshee qudbadeeydu waxay ahayd mid aanan u diyaargaroobin oo la macmiilay. Goobta ayaan marayay, kolkaa dad i garanayaa iga codsadeen inaan ereyo goobta ka jeediyo, sida uu sheegay imaam Samir el Refari oo ay idaacadda Ekot kula kulantay masjidka.
Arrintan ayaa ka dambeeysay bannaan-bax looga soo hor-jeedey xiristii ay dawladda Israa'iil albaabka u laabtay masjidka Aqsa, kadib laba ka tir-san ciidanka ammaanka oo goobtaa lagu toogtey.
Khudbad uu imaamku ka jeediyay bannaan-baxa ayuu ka sheegay ereyo ey ka mid yihiin in qowmiyadda Yuhuuddu aanay khiyaamada la soo daahin, qowmiyado fara badan ayay kula kaceen iyo sidoo kale qowmiyadda Maxamed. Sidoo kale isagoo uu imaamku ku tilmaamay yuhuuddu inay asal ku leeyihiin daayeerta iyo khaansiirka.
Wuxuu iimaanku sidoo kale sheegay in ereyada noocaasi ihi ey caadi ka yihiin ku isticmaalkooda waddammada dhaca nawaaxiga Bariga Dhexe, kuwaasina oo loola jeedo xag-jirrada israa’iiliyiinta ee quwadda ku haysta Falastiin. Hase yeeshee mar haddii ereyadaasi ey iminka dood dhaliyeen waa uu ka taxadari inuu isticmaalo, sida uu sheegay.
Salahuddin Barakat, ahna iimaan ka howl-gala akaadeemiyada diinta islaamka ee magaalada Malmö ayaa aamin-san inay tahay wax laga xumaado in dhaleeceeynta dawladda Israa’iil loo eedeeyo qowmiyadda Yuhuudda waxa lagu magacaabo antisemitism.
-Waan fahmi karaa in la taageero xuquuqda shacabka falastiiniyiinta, sida aan qaar badan oo annaga naga mid ahiba sameeyno. Hase yeeshee waa nasiib darro in la isticmaalo ereyo wax-yeeleeyneya yuhuudda, sida uu sheegay.
Masjidka magaalada Helsingborg oo imaamku ka howl-galo ayaa ka mid ah labada masaajid ee inta badan la booqdo ee magaaladaa. Sidaa daraadeed ay ula muuqato halis inuu sidaa Iimaan u hadlo.
-Waxaan aamin-sannahay inay muhiimmad ku fadhido iney imaammada iyo hor-joogeyaasha diintu ey ka duulaan diinta iyo aasaaska qiimeeynta diinta oo aanu qaadin dareenkooda iyo ereyo cid lagu soo jiidaneyo, sida uu sheegay Salahuddin Barakat.